पुरानो मेडिकल कलेजको सहयोगमा कालिकामा स्वास्थ्य शिविर – Saurahaonline.com
पुरानो मेडिकल कलेजको सहयोगमा कालिकामा स्वास्थ्य शिविर
नवलपुर १२ पुस । पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरको प्राविधिक सहयोगमा कालिका मावी विशालटारमा निशल्क स्वास्थय शिशिर सञ्चालन गरिएको छ । बिद्यालयको ३३ औं वार्षिकोत्सवको अबसरमा सञ्चालन गरिएको शिविरमा बिद्यालयमा अध्ययनरत बिद्यार्थी र अभिभावकहरुको निशुल्क स्वास्थ्य जाच गरिने छ ।
मेडिकल कलेजले संस्थागत सामाजिक दावित्व अन्र्तगत शिविरमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको कलेजका वरिष्ठ बजार प्रबन्धक दुर्गा न्यौंपानेले जानकारी दिनुभयो । शिबिरका लागि कलेजबाट पाच जना बिषेषज्ञ सहित १८ जनाको स्वास्थय प्राविधिकहरुको टोलि खटिएको छ । शिविरका लागि दुम्कौंली स्वास्थ्य चौंकीले पनि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको बिद्यालयका प्रधानाध्यापक रेशम कोईरालाले जानकारी दिनुभयो । भोलि सम्म चल्ने निशुःल्क स्वास्थ्य शिविरमा नाककान घाटी , बालरोग , कम्युनिटि मेडिसिन , दन्तरोग र जनरल फिजिसियन लगायतका बिष्ोषज्ञहरुले स्वास्थ्य जाच गर्नेछन् । शिविरमा पुरानो मेडिकल कलेजबाट आएका कम्युनिटि मेडिसिन बिषेषज्ञ डा दिपेन्द्र खतिवडा , जनरल फिजिसियन डा अजय गौतम , बालरोग बिषेषज्ञ डा. मनोज कौ.शल , नाक कान घाटी रोग बिषेषज्ञ डा विवेक शर्मा र डेण्टल सर्जन डा. अस्मिता पौंडेल सहितको प्राविधक समुह रहेको छ ।
मेडिकल कलेजले गाउ गाउमा पुगेर स्वास्थय शिविर सञ्चालन गर्ने आफ्नो निति अनुरुप बिद्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहयोग गरेको कलेजका वरिष्ठ बजार प्रवन्धक दुर्गा न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाले आगामी दिनमा गैंडाकोट , देबचुली , कावासोती लगायतका स्थानमा यस्ता निशुःल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य शिविरको देबचुली नगरपालिका वाड नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष मेखबहादुर सारु ले उद्घाटन गर्नुभएको हो । बिद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद पन्तको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा चलचित्रकर्मी मौंसमी मल्लको समेत उपस्थिित रहेको थियो । कार्यक्रममा सहयाक प्रधानाध्यापक डिल प्रसाद भुषालले सहभागीहरुलाई स्वागत गर्नुभएको थियो । बि.स. २०४१ सालमा स्थापित बिद्यालयले यहि पौंष १४ गते ३३ औं बार्षिकोत्सव मनाउदैं छ ।